Ngaba umntu uthi Bulletproofs? | PIVX
Ngaba umntu uthi Bulletproofs?
I-cryptographer ephakamileyo uJonathan Bootle uye wajoyina iqela lophuhliso lwe-PIVX!
Eyaziwa ngokuba yenye yee-cryptographer ezakha kwaye zabhala iphepha elimhlophe kwi-Bulletproofs, umsebenzi kaBootle uya kugxila ekuhlanganiseni ukuphumelela kwe-Bulletproofs kwi-protocol ye-PIVX yenkqubo ye-Zerocoin.
Ngamafutshane – oku kuthetha ukuthini i-PIVX?
1.Ubungqina be-Zerocoin ye-PIVX, okanye ubungakanani bokuthengiselana,
buya kuba yincinci yobukhulu bayo obukhoyo.
2. I-PIVX iya kukwazi ukuphumeza ukusekwa kweZerocoin.
Ukongezwa kweBotle kwiqela lethu lophuhliso kuyamangalisa kulo lonke uphuhliso lwethekhnoloji yesigqeba (blockchain).I-PIVX isele ibonelele ngobunini bobuBungqina boBungqina beProof of Stake (PoS), kunye nophuhliso oluqhubekayo lokusebenza kakuhle, ukhuseleko, ukunikezelwa kwemisebenzi kunye nokukhululeka kokusetyenziswa. Umsebenzi kaBootle kunye ne-bulletproofs kuya kuthetha ukuba ubumfihlo bodwa ngaphakathi kwesikhalazo siza kuphuculiswa kakhulu. (into engokwemvelo)
“Eli lixesha lokuqala ndibandakanyeka ngokuthe ngqo kwindlela esetyenziswayo ye-Bulletproofs theory kuyo nayiphina iphrojekthi, ndiyakuvuyela ukusebenza noMary Maller, umkhulumeli wokuqala we-PIVX, owayengumnye wabambisene bam abavela kwiqela le-UCL Infosec. “- UJonathan Bootle
Ubungqina obufutshane obuvela kwiYunivesithi yaseStanford kuchaza i-bulletproofs njengoko, “ubungqina obuncinci bokungqinelani nolwazi olungenakunyanisekileyo olungafunanga ukusekwa okuthembisiweyo […] I-Bulletproofs yenzelwe ukunika ukuthengiswa okuyimfihlo kwiBitcoin nakwezinye izixhobo zokubhala. Zonke iinkcukacha eziyimfihlo ziqulethe ubungqina besikhalazo sokuthi ukuthengiselana kuyasebenza. I-Bulletproofs iyanciphisa ubukhulu bokuba ubungqina be-cryptographic ukusuka ngaphezulu kwe-10kB ukuya ngaphantsi kwe-1kB. ”
I-Bootle ngumgqatswa we-PhD kwindawo yokubhala i-cryptography, esebenzayo kwiimpawu zobungqina obunempumelelo kunye nenjongo yokuphuhlisa, ngokukodwa, ubungqina bokuba nobungqina bendawo.
Sisoloko siqulunqa nge-teknoloji yethu, kwaye ukuba noJonathan njengenxalenye yeqela lethu lophuhliso, kubonisa ngokupheleleyo ukuzibophezela kwethu ekuqhubekeni kwezinto ezintsha, kunye nomnqweno wokukhokela iingcali ukuba zibe yingxenye ye-PIVX Community!
Wamkelekile kwiqela, uYonatan!